द्धन्द्धकालको घटनामा मलाई दण्डित गर्नुहोस, विप्लवलाई व्यवस्थापन गरौँ : डा. भट्टराई | रिपोर्टर्स नेपाल
द्धन्द्धकालको घटनामा मलाई दण्डित गर्नुहोस, विप्लवलाई व्यवस्थापन गरौँ : डा. भट्टराई
२०७५ फाल्गुन २२ गते प्रकाशित, l १५:५१
फागुन २२, काठमाण्डौ । पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तत्काल द्धन्द्ध व्यवस्थापन गरिनुपर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पुर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले द्धन्द्ध व्यवस्थापन छिटो गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभएको हो । क्षमा गर र भुल भन्ने नीतिका साथ द्धन्द्धको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने भन्दै उहाँले द्धन्द्ध व्यवस्थापनका क्रममा आफु दण्डित हुन पनि तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो“साँच्ची नै साथीहरुलाई अहिले पनि रिस बाँकी छ भने दण्डित गर्नुहोस् म दण्ड व्यहोर्न तयार छु । ”
द्धन्द्ध व्यवस्थापन समयमै हुन नसक्दा विकास र शान्तिको बाटोमा अवरोध श्रृजना भएको भन्दै उहाँले समयमै द्धन्द्ध व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो । उहाँले बिप्लब लगायत तराईका असन्तुष्ठ समुहसंग छलफल गरि समयमै माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । विकास र सम्मृद्धिका सपना समयमै पुरा गर्न नसके मुलुक फेरी द्धन्द्धमा फस्ने भन्दै उहाँले विप्लब समुहप्रति लक्षित गर्दै भन्नुभयो “ उनीहरु अत्यन्तै गम्भीर ढंगले लागेका छन् । यदि हामीले बेलैमा विकास र सम्मृद्धिका सपना पुरा गर्न सकेनौ र हामीले जनतालाई शुसासन दिन सकेनौ भने त्यो ज्वाला फेरी दन्केर आउने खतरा म देख्छु । त्यो बाटो ठिक छैन तर उनीहरुले रक्तश्राप गरेर यो राज्यलाई कमजोर पार्ने सामथ्र्य राख्छन । ”
उहाँले संघियतासंग असन्तुष्ट भएको पक्षसंग पनि समयमै छलफल र वार्ता गरेर समस्या सम्बोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
पुर्वीतमोर देखि अरुण हुदै पश्चिमको महाकालिसम्मको यात्रामा आफुले विकास र पुर्वाधारका कार्यक्रममा असन्तुलन देखको भन्दै उहाँले निर्वाचिन क्षेत्र र जिल्लालाई नभई राष्ट्रिय नीति बनाएर योजनावद्ध साथ विकास र पुर्वाधार निर्माणको काम गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले पश्चिम तर्फको झुलाघाटमा पक्कि पुल निर्माण गरि सिक्किम तर्फबाट १७ किलोमिटर बाटो जोड्न भारतसंग आग्रह गर्नुपर्नेमा उहाँले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
पहाडी जिल्लाहरुमा खानेपानीको समस्या देखिएकाले विस्तृत जल उपयोग तथा संरक्षण नीति बनाई खानेपानीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । शिक्षा क्षेत्रमा पनि उहाँले आमुल परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिर्वतन पुरै सल्य क्रिया नगरेसम्म देखिदैन । ”
विचारमा सुधार संगै अन्तराष्ट्रिय भू राजनीतिलाई मध्यनजर गरि गतिशिल तटस्थताको परराष्ट्रनीति अवलम्बन गरि मुलुकको विकासतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले कछुवा झै घर्सिने नभई वायुपंखी घोडा जस्तो उड्ने खालको नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग अर्थात् पुष्पलाल लोकमार्ग निर्माणको गति पनि अपेक्षित ढंगले अघि बढ्न नसकेको भन्दै उहाँले ३१ मिटर दुवैतर्फ राख्ने कुराले अधिकांश पहाडी भेगका बस्ती सखाब हुने देखिएकाले सडक ऐनलाई संसोधन गरि यसलाई घटाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशको दुर्गम स्थान जाजरकोटको कुदु लगायत स्थानमा अझै पनि लोकमार्गको सडक ट्रयाक खुल्न नसकेको बताउनुभयो । ऐतिहासिक हुलाकी मार्गलाई आधार बनाएर लोकमार्ग बनाउनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
लोपोन्मुख जातीको विशेष क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अल्पसंख्यक जातीहरु अलपत्र परेको भन्दै संरक्षित क्षेत्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सडक र पुर्वाधार निर्माणमा पनि ढिला सुस्ती देखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
भ्रष्टाचारको जरो नै निर्वाचन बनेको भन्दै उहाँले राजनीतिक प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औल्याउनुभयो । उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली र पुर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था तर्फ जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पुर्वाधार, शहरीकरण, वस्तीविकास, पर्यटन, सुरक्षा लगायतका रणनीति समेट्ने गरि राष्ट्रिय विकास र सम्मृद्धिको राष्ट्रिय रणनीति बनाएर विकास कार्यलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउदै उहाँले संविधान संशोधन, शुशासन र सदाचार, न्यायलय र सुरक्षा अंगको पुनसंरचनामा जोड दिनुभयो ।
संविधान अनुसार आवश्यक ऐन समयमै बनाउन नसक्दा संघियताको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै उहाँले कर्मचारीको अभाव, जिल्ला र स्थानिय तहको अधिकार क्षेत्रको विवाद, प्रदेशको नामाकरण तथा राजधानी राख्ने सवालमा देखिएका समस्याको समाधान खोजिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
नया शक्ति पार्टीले पुर्वको चियोभन्ञ्याङ्ग देखि महाकालीसम्म गरेको यात्राको क्रममा आफुले गरेको अनुभवको फेयरिस्तलाई पुर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले संसदमा राख्नुभएको हो ।
२०७५ फाल्गुन २२ गते सम्पादित l १६:३६